विराटनगरको नोबेल मेडिकल कलेज तनाबग्रस्त - Health Aawaj -ahealth news portal in Nepal
गृहपृष्ठ ∕ समाचार ∕ विराटनगरको नोबेल मेडिकल कलेज तनाबग्रस्त
विराटनगरको नोबेल मेडिकल कलेज तनाबग्रस्त
हेल्थ आवाज आईतबार, २०७६ साउन ५ गते, १४:०९ मा प्रकाशित
विराटनगर–नोबेल मेडिकल कलेजमा उपचारको क्रमममा एक जना विरामीको मृत्यु भएपछि आइतबार दिउँसो तनाबग्रस्त बनेको छ । घुडाकोे शल्यक्रिया गरेपछि सुनसरीको दुहवी नगरपालिका – ६ का ४७ वर्षिय सुनिल कुमार साहको आइतबार विहान मृत्यु भएको थियो ।
चिकित्सवले उपचारको क्रमममा लापारबाहि गरेको भन्दै मृतकका आफन्तहरू अहिले आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । लापारबाही गर्ने चिकित्सवलाई कारवाहीको माग राख्दै उनीहरूले अस्पताल अगाडी नाराबाजी गर्दै बसेका हुन् । करिब तीन सयको खंख्यामा पीडितका आफन्त र स्थानिय आन्दोलित छन् । घरबाट मोटसाइकल निकाल्ने क्रममा गत बिहीबार साहको घोडामा चोट लागेको थियो । सोही दिन घोडामा लागेको चोटको नोबेलमा उपचारपछि घर फर्किएका थिए । साह शुक्रबार फलोअपमा नोबेल अस्पताल आएका थिए । हाडजोर्नी तथा नशारोग विशेषयज्ञ डा. धिरज सिंहले शल्यक्रिया गरिनुपर्ने बताएपछि उनलको टिमले साहको शल्यक्रिया गरेको थियो ।
‘डा. सिंहले घोडामा लागेको चोट बढदै गएकोले शल्यक्रिया गरिनुपर्ने बताएका थिए । शल्यक्रिया गर्न हामी पनि तयार भयौं । शनिबार शल्यक्रिया भयो । त्यसदिन हामीलाई भेटन दिइएन,’ ‘मृतकका भाई प्रदिप साहले भने, ‘आइतबार विहान त मृत्यु भइसकेको जानकारी दिइयो । यस्तो खबर सुन्दा हाम्रो होस उड्यो । एक छिन अगाडी घरबाट मोटसाइकल चलाएर आएको मान्छे, अहिले चिकित्सवले मृतक घोषणा ग¥यो । खुटाको उपचार गर्दा मान्छे कसरी मृत्यु भयो ? त्यो पनि विहान मृत्यु भएको रहेछ । हामीलाई आइतबार ९ बजेमात्र जानकारी दिइयो ।’ उपचारमा लापारबाही गर्ने चिकित्सवलाई कडा कारवाहीको माग पीडित पक्षले राखेको छ ।
यता नोबेल मेडिकल कलेजका प्रशासकिय अधिकृत नारयण दाहालले उपचारको क्रममा विरामीको मृत्यु भएको भन्दै अस्पतालले कुनै पनि लापारबाही नगरेको दाबी गरे । चिकित्सवले दिएको जानकारी अनुसार शल्यक्रिया गरेपछि वार्डमा सार्ने क्रममा हृदयघात भएर मृत्यु भएको उनले बताए । ‘शल्यक्रिया पछि विरामी वडामा सार्ने क्रममा हदृयघात भएको चिकित्सकले जानकारी दिनुभयो’ उनले भने ‘विरामीलाई बचाउन हामीले तत्काल आइसियूमा राखेर हरसम्मभवको उपचार गरेको हो ।’